अहिलेसम्म कंगना रनौतको ‘जजमेन्टल है क्या’ले कति कमायो ? « News24 : Premium News Channel
अहिलेसम्म कंगना रनौतको ‘जजमेन्टल है क्या’ले कति कमायो ?
काठमाडौं । बलिउडकी क्वीन कंगना रनौत र राजकुमार रावको फिल्म ‘जजमेन्टल है क्या’ गत २६ जुलाईबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आइसकेको छ । प्रकाश कोवेलामुडीको निर्देशनमा बनेको यो फिल्मको नाम पहिले ‘मैन्टल है क्या’ राखिएको थियो । तर, फिल्मको नामलाई लिएर धेरैले विरोध जनाएपछि निर्माताले यो फिल्मको नाम ‘जजमेन्टल है क्या’ राखेको थियो ।
फिल्ममा कंगना रनौत र राजकुमार रावको अलवा हुसैन दलाल, सतिश कौशिक, अमायरा दस्तुर, अमृता पुरी र जिमी शेरगिलको मुख्य भूमिकामा रहेको छ । कंगनाको यस फिल्मलाई दर्शकहरुले रुचाईरहेका छन् । जसको कारण फिल्मले अझैं पनि बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरिहेको छ ।
बालाजी मोशन मिक्चर्सले आफ्नो अफिसियल ट्विटर अकाउन्टमा ट्विट गर्दै फिल्मको अहिलेसम्मको कमाई सार्वजनिक गरेको छ । यस ट्विटका अनुसार ‘जजमेन्टल है क्या’ले अहिलेसम्म बक्स अफिसमा ४० करोड भन्दा बढीको ब्यापार गरिसकेको छ । मानसिक रोग एक्युट सायकोसिशको शिकार बनेकी ‘बाँबी’को भूमिकामा अभिनेत्री कंगनालाई देख्न सकिन्छ । अभिनेत्री कंगनाले फिल्मको आफ्नो भूमिकालाई न्याय गरेकी छन् ।
त्यस्तै निर्देशक प्रकाश कोवलामुदीले लेखिका कनिका ढिल्लनको दमदार स्क्रिप्टलाई पूरा न्याय गरेका छन् । फिल्मको पहिलो भागलाई आफ्नो थ्रिलर र सस्पेन्समा बाँधिएको छ । यस भागमा केही डर लाग्दा सिनहरु पनि समावेश गरिएको छ ।